Madaxweeyne Farmaajo: Ninkii aan nabad rabin dalka ha isaga tago | Jubbaland Media Online
Madaxweeynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Max’ed C/laahi Farmaajo ayaa sheegay in howlgallada xasilinta Muqdisho ay socon doonaan, isagoo ugu baaqay dhinacyada diidan in hubka lagu celiyo gacanta dowladda in ay ka waantoobaan.
Waxa uu xusay in qorshaha dowladdu yahay in lala dagaalamo Al-shabaab, amniga dalkana ay gacanta ku dhigto dowladda, isagoo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in caasimadda hub lagu dhex sito, kaa oo ay dowladdu ka warqabin.
Waxa uu ugu baaqay ciddii aan dooneyn in Muqdisho iyo dalku nabad noqo in ay isaga tagaan oo ay aadaan dalal kale, isagoo sheegay in dowladdu aysan marnaba ka laaban doonin tallaabooyinka lagu sugayo ammaanka.
Qorshaha xasilinta Muqdisho oo ay dowladda Soomaaliya u diyaarsatay ciidamo isugu jira Boolis, Nabadsugid iyo Militari ayaa intii uu socday waxaa jiray mucaaraddo adag oo uga imaaneeysay dhinacyada hubeeysan ee magaalada Muqdisho, kuwaa oo ku andacoonaya in aysan suurogal ahayn in ay hubka dhigaan ayadoo Shabaab ay ka arimiyaan qeybo ka tirsan dalka.
Qaar kale ayaa ku doodaya in hub ka dhigista Muqdisho ay tahay arrin siyaasadeed, loona baahanyahay in guud ahaan dalka ay ka dhaqan gasho oo aan lagu koobin Muqdisho.